ZTE Blade 20 5G waxaa lagu soo bandhigayaa Dimensity 720 iyo MiFavor 10.5 | Androidsis
ZTE Blade 20 5G waxaa loo soo bandhigay Dimensity 720 iyo MiFavor 10.5
Soo saaraha Aasiya ee ZTE ayaa si firfircoon u shaqeynaya rubucii ugu dambeeyay ee sanadka, dhammaantood ka dib markii uu soo bandhigay qalabka moobiilka sida ZTE Axon 20 5G, ZTE Blade V2020 5G y ZTE Blade A3Y. Hadda shirkaddu waxay ku dhawaaqeysaa taleefan casri ah oo cusub oo teknolojiyad 5G ah qiimo xiiso leh.
ZTE Blande 20 5G waa kudarsigii ugu dambeeyay ee taxanaha taasi waxay siinaysay guulo aad u badan sanadihii la soo dhaafay, dhammaantood iyada oo aan la dhayalsanayn Axon, ayaa loo tixgeliyaa taleefannada sare ee shirkadda. Khadka Blade waxaa loogu talagalay jeebado aan u baahnayn in laga sameeyo wax weyn oo la doonayo in la helo taleefan wax qabad fiican leh.
1 ZTE Blade 20 5G, oo dhan oo ku saabsan aaladda cusub
ZTE Blade 20 5G, oo dhan oo ku saabsan aaladda cusub
El cusub ZTE Blade 20 5G wuxuu go'aansadaa inuu sharad ku dhigo shaashadda 6,52-inch IPS LCD ee leh HD + xallinta, waa barta ay ku guuldareysato, maaddaama oo aan la helin Full HD + qaraarku wuxuu ka qaadanayaa dhibco tartankiisa. Kaamirada sawir-qaadaha (selfie camera) waxay ku dhisantahay heer dhibic waana 8 megapixel sensor.
Mount 6 GB oo RAM ah, 128 GB oo keyd ah, halka processor-ka la xushay uu yahay Dimensity 720 at 2,0 GHz, oo keena 5G isku xirnaanta terminalkan cusub. Batariga waa 4.000 mAh oo si dhakhso leh u buuxinaya, in kasta oo soosaaruhu uusan wali xaqiijin watt-ka.
Qeybta kamaradaha gadaal waxaa kujira wadar ahaan seddex, midka ugu weyn waa 16 megapixels, wuxuu awood u leeyahay inuu duubo fiidiyowga Full HD, ta labaad waa 8 megapixel xagal ballaadhan kan saddexaadna waa 2 megapixel bokeh. Ku dar isku xirnaanta 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS iyo akhristaha sawirka dambe. Nidaamku waa Android 10 hoosta MiFavor 10.5 lakabka leh barnaamijyada shirkadda.
ZTE BADBAAD 20 5G
MUUQAAL 6.52-inch LCD leh HD + xallinta
PRORESOR Cufnaanta 720
KAAMARKA DIBADDA 16 MP f / 2.2 dareeraha ugu weyn / 8 MP f / 1.8 shidma-xagal ballaadhan / f / 2.4 dareeraha bokeh
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 10 oo leh Mifavor 10.5
Isku xirnaanta 5G / Wi-Fi ac / Bluetooth 5.1 / USB-C / GPS
MUUQAALO KALE Raadiyaha FM / akhristaha sawirka dambe
Qiyaasaha iyo Miisaanka: 165 x 88.9 x 9.75 mm / 190 garaam
El ZTE Blade 20 5G waxay ku timid laba ikhtiyaar oo midabbo gaar ah, midab buluug ah oo buluug khafiif ah qiimo dhexdhexaad ah oo ah 1.499 yuan (191 euro qiimaha sarifka). Qalabka ayaa markii hore lagu iibinayaa Shiinaha, laakiin ballaarintiisa ayaa la filayaa inay noqoto mid caalami ah ka hor dhammaadka sanadka, dhammaanba kharashka shirkadda, oo rajeynaya inay iibiso qaybo badan oo ka mid ah heerarka soo-galitaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ZTE Blade 20 5G waxaa loo soo bandhigay Dimensity 720 iyo MiFavor 10.5
Talooyin ku saabsan doorashada taleefanka bilaa xadhigga ah ee ugu fiican gurigaaga